Momba anay - Xingtejia Environmental Protection Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Jiangsu Xingtejia fiarovana ny tontolo iainana Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Mifantoha amin'ny famokarana famokarana fanoherana mahatohitra hafanana
XTJ dia manana fitaovana fanariana, milina ary fitiliana tanteraka.
XTJ 10 taona mitombo hatrany ny traikefa amin'ny indostrian'ny fanariana.
Ny fahaizan'ny customization OEM matanjaka. Mamaha karazana olana ara-teknika maro ho anao.
Xingtejia dia voasoratra anarana tamin'ny 2010 niaraka tamin'ny renivohitra voasoratra anarana RMB 31,19 tapitrisa ary any amin'ny Faritanin'i Jiangsu, Sina.
Izahay dia orinasa mpanamboatra OEM izay manana ny fahaizantsika milina. Ny fizotrantsika dia misy fiasa mafana (casting bobongolo Shell, fanariana fampiasam-bola, fanariana bobongolo fasika resin, fanariana fampiasam-bola Silica sol, ary fitsaboana hafanana), fiasana mangatsiaka (Lathe, fikosoham-bary, fanamainana, fandavahana, Sandblasting ary fametahana).
Orinasa voamarina tamin'ny ISO9001: 2015 izahay. Rafitra fitantanana henjana dia mahatonga ny drafi-pamokarana ho tonga amin'ny atrikasa amin'ny fotoana ilana anao takiana.
Ho fanampin'izany, isika koa dia orinasa teknolojia avo lenta voamarin'ny governemanta nasionaly. Manana patanty vaovao azo ampiharina 30 izahay. Ary hatramin'ny 16 amin'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny famokarana grates.
Ny orinasanay dia manana haitao mandroso, fizotra matotra ary fitaovana famokarana. Vokatra famatsiana matihanina amin'ny fitaovana mahatohitra hafanana, tsy mahazaka ary mahatohitra harafesina.
Ny vokatray dia misy idiran'ny indostria maro toy ny foiben-jiro fandrehitra fako, fikosoham-bary, fitrandrahana harena ankibon'ny tany, fikolokoloana taratasy, fikolokoloana fitsaboana hafanana sns.
Manana ekipa mahaleo tena aorinan'ny varotra izahay. Rehefa misy olana amin'ny vokatrao dia hiara-hiasa aminao tanteraka izahay hamaha ny olana. Manana ekipa teknika matihanina izahay hanome anao tolotra teknika matihanina.
Nifantoka tamin'ny famokarana kojakoja boiler izahay nandritra ny 10 taona mahery. Nanomboka tamin'ny fikarohana tsy miankina sy ny fampivoarana ny fizotry ny famokarana Alemanina Martin Grate Bar izahay ary nahomby tanteraka!
Tao anatin'ny folo taona lasa, tsy nitsahatra nanao fikarohana sy fanavaozana izahay. Mihoatra ny 50 ny vokatra vaovao sy ny fizotran'ny fanodinana novolavolaina isan-taona. Miaraka amin'ny ezaka tsy manam-paharoa ataontsika dia mihamatotra tsikelikely ny teknolojia misy antsika. Ny kalitaon'ny casting vy mahatohitra hafanana dia nankafizin'ny mpanjifa marobe eto an-toerana sy any ivelany.
Atrikasa momba ny milina
Vita ny fitaovam-panadinana anay. Ny fitsirihana azontsika atao dia ahitana ny famakafakana ny firafitry ny simika, ny refy fizarana, ny fisehoana ivelany, ny fanangonana ny fitaovana, ny fisedrana ny vatan'ny andriamby, ny fitiliana ultrasonika, ny fitsapana ny hamafin'ny saina, ny fitsapana ny metalylographika, ny fizahana toetra mekanika.
Ny crédit tsara no fototry ny toerantsika eny an-tsena! Ny fifehezana kalitao henjana no hery manosika antsika hampivoatra hatrany!
Ivotoerana fitiliana fananana mekanika
Nanomboka ny taona 2005
No. NY MPIASA
TONNAGE CASTING FAHATELO